La Jolie cottage - Nje ezimbini - pool eshushu.
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguBridget
UBridget ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
I-cottage yaseLa Jolie ibekwe ngaphakathi kweegadi ezintle kwaye isebenzisa ichibi elifudumeleyo, ekwabelwana ngalo kuphela nabanini.Ipropathi entle & exhotyiswe kakuhle yeperigordian egcwele isimilo ilungele izibini okanye abahambi ababodwa abafuna ubumfihlo kunye noxolo.Uya kuyithanda i-cottage ngenxa ye-ambiance yayo kunye nezo zongezo ezincinci ezithetha kakhulu.Isetyhula ihamba ngqo ukusuka emnyango. Iidolophu zemarike ezikufutshane. I-cottage ilungile kwizibini ezitshatileyo, abaqhubi be-solo, kunye nabahambi bezoshishino. Yonwabela!
Indawo ekhethekileyo yokuhlala: nokuba awufuni kwenza nto kwaphela, phumla, hlaziya kwaye utshaje iibhetri zakho okanye ugcwalise iintsuku zakho ngezinto ezintle kunye nezinto ezenziwayo- ndwendwela iilali zamandulo kunye ne-chateaux, iphenyane elihla imilambo emangalisayo, sebenzisa ukuhamba okuninzi okumangalisayo kwaye iindlela zokuhamba ngebhayisikile okanye ukonwabele ukutya okumnandi kunye neemarike ezininzi ezikhoyo ezikufutshane.
Ithenisi kunye negalufa ziyafumaneka kwi-5km kude e-Excideuil.
Isetyenziswa nangabanye phandle amanzi anetyuwa inamanzi ashushu ipuli
Siyipropathi yokugqibela kwindlela ezolileyo. Intle kakhulu kwaye isemaphandleni, ingoma yeentaka emangalisayo! kodwa ziikhilomitha ezimbalwa ukusuka kuzo zonke ii-amenites.Iivenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela, iimarike kunye neekhemesti. I-boulangerie yethu yasekhaya (eyaziwa ekuhlaleni njengeyona igqwesileyo kwindawo) ide izise kuthi ngoMgqibelo nangoLwesithathu kusasa!
Ukuhamba okusetyhula okumnandi ngaphezulu nje kweyure enye ubude kudlula emnyango wakho.
Zininzi izilwanyana zasendle zokubona nokuva.
I-Thiviers kunye ne-Excideuil ziidolophu ezinkulu zentengiso. IBrantome entle, iBordeilles, iSt Jean de Cole, iJumilhac, iHautfort, iPerigueux zezinye zeendawo onokundwendwela kuzo malunga nemizuzu engama-30 ngemoto.
ILimoges, iBrive, iMontignac, iBeynac, iBergerac zonke zingaphakathi kwe-1.20 mins.
Siya kuhlala silapha ukuza kukwamkela kwaye siya kuhlala sikunika isiselo esamkelekileyo. Sikhona xa unengxaki but respect your privacy nawe.Ndiyavuya ukwabelana ngeemfihlo ezikufutshane kunye neengcebiso. Into ekufuneka uyenzile kukubuza :-)
Siya kuhlala silapha ukuza kukwamkela kwaye siya kuhlala sikunika isiselo esamkelekileyo. Sikhona xa unengxaki but respect your privacy nawe.Ndiyavuya ukwabelana ngeemfihlo ezikufu…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Germain-des-Prés